Uyilo & nophuhliso - Ningbo Euro Ikubumbe & Plastic Co., Ltd
Uyilo & nophuhliso
• umngundo kwemifanekiso
Uyilo & Product Development
• Umngundo Flow Analysis
• Umngundo kwemifanekiso & Uguqulelo kancinane
Plastic yingxenye kwemifanekiso
Prototype yingxenye kwemifanekiso
Uluhlu ekunciphiseni Final
Uluhlu design zomngundo
Uluhlu trial zomngundo
uyihlanganise yonke impahla yangaphandle
rattan isofa & isitulo sokubumbela
rattan esitulweni ekunciphiseni
itheyibhile rattan ekunciphiseni
Gnostic base ekunciphiseni
umnikazi brush ekunciphiseni
konwele cover ekunciphiseni
izixhobo itreyi ekunciphiseni
ibhokisi chocolate ekunciphiseni
uthuli bin ekunciphiseni
ilondolo ibhaskiti ekunciphiseni
sokutyala plastic ufane
ibhokisi yokugcina ekunciphiseni
irrigation pipe ekunciphiseni
ibhokisi kuhlangana ekunciphiseni
Ipeyinti roller ekunciphiseni
izithambiso cap ekunciphiseni
flip top cap sokubumbela
amafutha cap ekunciphiseni
ukhuseleko ring cap sokubumbela
izivalo cap ekunciphiseni
bevuthela ufane ne deflasher
ibhotile izithambiso wadlulisa sokubumbela
isigubhu igalelo ekunciphiseni
jerrycan igalelo ekunciphiseni
ufane juice Ibhotile
umatshini rotary wadlulisa sokubumbela
Thin udonga ekunciphiseni
ice indebe cream sokubumbela
udonga obhityileyo umgqomo ukutya sokubumbela
big ufane slide
kids 'Playhouse sokubumbela
intambo ilokhari ekunciphiseni
ufane slide amancinci
ufane isixhobo sombane
air conditioner ekunciphiseni
kwisiqandisi kokha ekunciphiseni
wokuhlamba machine ekunciphiseni
tank oil ekunciphiseni
Euro zomngundo Iqhayisa iitalente kakuhle kwishishini ukuze kususwe ukuyila. Zonke abayili zethu sande waqala abenzi ngumngundo, esazi kakuhle imilinganiselo yaseYurophu ukuba bayile & ukwakha ngumngundo esemgangathweni.
Kuyo yonke le nkqubo ukuyila nabaphathi bethu, nabayili, iinjineli kunye neengcali yokuvelisa ezidityaniswe ukukhangela zonke iinkcukacha phambi kokuba ukusebenza ngaphandle imizobo ngumngundo 3D lokugqibela.
Iqela lethu uyilo, abaphathi inkqubo & ukuthengiswa zinika sisaqala ukunceda abathengi ukuchonga nokuwa ngokusebenzisa uhlalutyo sokubumbela-flow, njl, kwaye zinika izisombululo kunokwenzeka.
ngoyilo lwenkxaso • Umngundo:
imizobo • Umngundo 2D
imizobo • Umngundo 3D
design zomngundo noun
isiphakamiso isakhiwo • Umngundo
Ningbo Euro zomngundo & Plastic Co., Ltd